Maqaal: Maamul goboleedyada Ma fahansan yihiin nidaamka Federaalka? - Latest News Updates
Maqaal: Maamul goboleedyada Ma fahansan yihiin nidaamka Federaalka?
Waxaan ka soo jedaa odayaashii lahaa soo jeedinta fikirka in dalka lagu dhaqo nidaamka awood qaybsiga Federaalka 1947, qaar ka midna ayku ku naf waayay raadinta nidaamkaas.
Baaris dheer ka dib markaan u guur galay xisbigii HDMS oo ahaa midkii u taagnaa inuu fuliyo fikirka federaalka waxaa ii soo baxay Federaalkii ay raadinayeen odayaasheeni inuusan ahayn midka hada lagu dhaqaayo dalkeena, waayo ma aha inuu nidaamka federaalka ka hor yimaado jiritaanka qaranimadda iyo madax banaanidda dalka Soomaaliya.
Waxaan ku tilmaami karaa federaalka hada la isticmaalaayo inuu yahay mid caqabad ku ah jiritaanka iyo madax banaanida dalka Soomaaliya, waa nidaam la doonaayo in lagu burburiyo sharafka dalka iyo dadka Soomaaliyeed, waa nidaam ay doonayaan shaqsiyaad inay ku rati kacsadaan si danahooda gaarka ah ay ugu gaaraan ama hanti dhaqaale ku sameeystaan.
Waxaan ognahay maamulada qaarkood oo iskugu yeero inay yihiin dowlad leh madaxwayne, gaar ka mid ah inaysan caasimadaha goboladooda aysan tagi karin oo aysan waxba ka warqabin dadka iyo degaanka ay sheegayanaan baahidooda, maamulkoodana uusan dhaafsanayn xafiis yar oo ay ajanabi ku waardiyeeyaan. Waxay damiirta iyo Soomaalinimadda ayna fareysaa inaan diidno waxkasta oo wax u dhimi kara sharafka iyo madaxbanaanida dalka Soomaaliya.
Waxaa kaloo is xasuusin mudan in dalka Soomaaliya uusan yeelan karin Lix Madaxwayne, waa mid diideeysa maskaxda saliimka ah. Marka ay timaado maskaxada guud ee dadka iyo dalkaba waa xaaraam inaan u taageerno shaqsi degaan iyo qabiil.
Federaalka looga dhaqmo aduunka iyo sida ay Soomaaalida qaarkeed u fahmeen shaqo iskuma laha, hadaanan arinkaan la saxin waxaa hubaal ah inaad ku raagi doono burbur iyo dib u dhac dhankasta leh.
Sheekh Nuur Abuukar Qaasim